አሞጽ 5 NASV – Amos 5 AKCB | Biblica
አሞጽ 5 NASV – Amos 5 AKCB
Adwotwa Ne Adwensakra Ho Frɛ
1Tie asɛm yi, mo Israelfo, saa adwotwa yi fa mo ho:
2“Ɔbabun Israel ahwe ase
wɔapo no wɔ nʼankasa asase so,
na onni obi a ɔbɛma no so.”
3Nea Otumfo Awurade se ni:
“Kuropɔn a ɔde mmarima ahoɔdenfo apem ko ma Israel no,
mu ɔha pɛ na wɔbɛka;
Kurow a ɔde ahoɔdenfo ɔha no,
mu du pɛ na wɔbɛka.”
4Nea Awurade ka kyerɛ Israelfo ni:
“Monhwehwɛ me na munnya nkwa;
na munntu kwan nkɔ Beer-Seba nso.
Ampa ara Gilgal bɛkɔ nnommum mu
6Monhwehwɛ Awurade na munnya nkwa,
anyɛ saa a ɔbɛpra Yosef fi te sɛ ogya;
na Bet-El rennya obi anum no.
7Mo a moma atemmu yɛ nwen
na mototo trenee ase.
8Nea ɔbɔɔ nsoromma, Akokɔbeatan ne ne mma,
nea ɔdan sum yɛ no adekyee
na ɔma awia dan adesae.
Nea ɔboaboa po mu nsu ano
na ohwie gu asase so,
9Ɔsɛe abandennen ntɛm so
na obubu kuropɔn a wɔabɔ ho ban nso,
10motan nea ɔteɛteɛ wɔ asennii
na mubu nea ɔka nokware animtiaa.
11Mutiatia ohiani so
na mohyɛ no gye aduan fi ne nkyɛn.
Enti ɛwɔ mu sɛ mode abo a wɔatwa asisi afi akɛse de,
ɛwɔ mu sɛ moayɛ bobe nturo a ɛyɛ fɛ de
nanso morennom mu nsa.
12Na minim mo mmarato dodow
ne mo bɔne akɛse no.
Mohyɛ atreneefo so na mugye adanmude
mubu ahiafo ntɛnkyew wɔ asennii.
13Ɛno nti, onyansafo yɛ komm saa mmere yi mu,
efisɛ ɛyɛ mmere bɔne.
Na Asafo Awurade Nyankopɔn bɛka wo ho,
sɛnea moka sɛ ɔyɛ no.
15Munkyi bɔne, na monnɔ papa;
Mummu atɛntrenee wɔ asennii.
Ebia, Asafo Awurade Nyankopɔn
benya ahummɔbɔ ama
Yosef nkae no.
16Enti nea Awurade, Asafo Awurade Nyankopɔn se ni:
“Adwotwa bɛba mmorɔn nyinaa so
na ɔyaw ne apinisi bɛba mmɔnten so.
Wɔbɛfrɛ akuafo ama wɔabesu
na agyamfo abetwa adwo.
17Wobetwa adwo wɔ bobeturo nyinaa mu,
efisɛ mɛnantew mo mu,”
Awurade Da No
Dɛn nti na mopɛ sɛ Awurade da no ba?
Saa da no bɛyɛ sum, na ɛnyɛ hann.
19Ɛbɛyɛ te sɛ onipa a oguan fi gyata anim
na okohyia sisi,
sɛnea owura ne fi
de ne nsa to ɔfasu so,
20Na Awurade da no bɛyɛ sum; ɛrenyɛ hann,
ɛbɛyɛ sum kabii a hann nsinsan biara nni mu.
21“Mikyi na mepo mo nyamesom mu aponto;
22Ɛwɔ mu sɛ mode ɔhyew afɔre ne aduan afɔre brɛ me de,
Mode asomdwoe afɔre brɛ me
23Momfa mo nnwonto gyegyeegye no mfi me so!
24Mmom, momma atɛntrenee nteɛ sɛ asubɔnten,
na trenee nyɛ sɛ asuten a ɛrenyow da!
25“Israelfo, ɛnyɛ me na mode afɔrebɔde ne ayɛyɛde brɛɛ me
26Mode mo ho nyinaa ato Molok nyame,
27Ɛno nti, metwa mo asu akɔ Damasko nohɔ,”
sɛnea Awurade a ne din ne Asafo Onyankopɔn se ni.
AKCB : Amos 5